सम्पादकिय - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
दाउरा टिप्न गएका श्रीमान-श्रीमती नदिले बगाएर वेपत्ता
२६ हजार ३ सय ९६ जना नेपालीको उद्धार ,१ सय ५७ शव ल्याइयो
संविधानको दुरुपयोग नगरियोस् !
शुक्रबार, असार १९, २०७७
नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको शीर्ष तहका केही नेताबाट चर्को असहयोग भइरहेको महसुस गरिरहेका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा आफू माथि गम्भीर षडयन्त्र हुँदै गरेको निचोडमा ओली छ...
कोरोनाको भिडमा सरकार नहराओस् !
बुधबार, चैत्र १९, २०७६
पछिल्लो समय विश्व कोरोना भाइरस(कोभिड-१९)बाट आक्रान्त छ । चैत्र-१९ सम्म विश्वका ८ लाख ५८ हजार मानिसमा कोरोना संक्रमण भइसकेको छ भने ४२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका, च...
प्रधानमन्त्रीको वाम राजनीति !
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०७६
यतिखेर मुलुकको राजनीति प्रधानमन्त्री ओलीको परिक्रमा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले नचाहेको र चाहेको दुवै प्रकृतिका घटनामा प्रधानमन्त्री ओली विवादित र रक्षात्मक बन्दै छन्। मुर्छित सपना र चर्को राष्ट्रवाद...
सोमवार, माघ १३, २०७६
संसद्को बहस र प्रक्रियामा निर्णय लिने, संसद् सदस्यहरूलाई अनुशासित गर्दै रचनात्मक ढङ्गले संसद् चलाउने जिम्मेवारी सभामुखको हुने गर्दछ । सभामुख चयनको प्रकियामा नेकपाले सांसदहरूलाई उनीहरूको विश्वासमा सम्झ...
बुधबार, पुस ९, २०७६
विधि र सुशासन धर्मराएको छ मुलुकमा। सर्वसाधारण जनताले जीवनसँग जोड्न र महसुस गर्न नपाएको वर्तमान लोकतन्त्र केवल टाठाबाठा व्यापारी र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पेवा बन्दै गरेको घटनाहरू उजागर हुँदै छ । तीन व...
नाटकीय ढंगले सभामुख पद खाली गराइयो । संसद अधिवेशन नचलेको समयमा संसदको प्रशासनिक काम उपसभामुख मार्फत हुँदै आइरहेको छ । वर्तमान उपसभामुखबाट आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापुर्वक निर्वाह हुँदै आएको छ । राष्ट्रपति...
आइतवार, कार्तिक १७, २०७६
गत कात्तिक १६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा आफ्नो स्वास्थ्यबारे ब्रिफिङ गरे । आफू सिकिस्त बिरामी नभएको तर मिर्गौलाले राम्रोसँग काम नगरेको पार्टी ने...
भनिन्छ, संसारको कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन । यहि सिद्दान्तको जगमा टेकेर नेपालको संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान थुप्रै कमीकमजोरीको वाबजुद कार्यन्वयनको दौरानमा रहेको छ । मुलुकले असंख्य आन्दो...
विचित्रको हतारमा जनता, कछुवा गतिमा सरकार !
शुक्रबार, भदौ १३, २०७६
भनिन्छ, 'सरदार' को वस्तीमा 'नाई' को के काम ? उल्लेखित भनाइ सिंहदरबारले पेवा बनाउन तम्सिएको जनताको बुझाइ छ । जीवनभर सिद्धान्तको रटान दिने नेपाली वाम आन्दोलन अल्पकालीन सत्ता प्राप्तिलाई सम्पूर्णता सम्झद...
सरकारको ‘ब्याक गियर’ !
बिहिबार, असार २६, २०७६
मुर्छित सपनाहरुको सफल मार्केटिङ गर्दै राष्ट्रवादको विगुल फुक्दै निर्माण गरिएको वाम गठबन्धनको अपार सफलता पछि सिंहदरबार पुगेको सरकार 'ब्याक गियर' हाल्न विवश बन्दै छ। २००७ साल देखी कुनै पनि सरकारले आवधिक...
समृद्धिको सिद्धान्त !
मङ्लबार, जेष्ठ १४, २०७६
शान्ति, स्थिरता, विकासको नारामा करीब १६ महिना अगाडी जनादेश मार्फत सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्न सफल वाम सरकार समृद्धिको भाषणबाट पछि हटेको छैन । नतिजा उसले चाहे जस्तो आम जनताले महशुस गर्न नपाए पनि आफ्नो का...
सरकारलाई असफल हुने छुट छैन !
बिहिबार, बैशाख १९, २०७६
शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको नारा नेपाली जनतामाझ यती लोकप्रिय भयो कि जनताले दायाँ बायाँ नसोचेर वामहरुलाई भारी जनादेशकासाथ सिंहदरबार सुम्पिए । विगत सरकारले मच्चाएका गडबडी रोकिने मात्र हैन सुधार समेत हुन...
लगानी सम्मेलन पछि सरकारको दायित्व
आइतवार, चैत्र १७, २०७५
वर्तमान सरकार निर्माण भए लगत्तै विज्ञ अर्थमन्त्रीले मुलुकको तत्कालिन अर्थतन्त्रको अवस्था दर्शाउन श्वेत पत्र जारी गरे । समृद्धिको भोक जगाउँदै मतपत्र मार्फत प्राप्त आवधिक सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्नुलाई...
रक्षात्मक सिंहदरबार !
शुक्रबार, चैत्र १, २०७५
सिद्धान्तत सत्ताको चरित्र दमनकारी हुन्छ । संविधान र कानुनको पालना गराउने दायित्वको कारण सत्ता आलोचित समेत हुने गर्दछ । अधिक शक्ति प्राप्त गर्ने सरकारको चाहानाले सत्ताको अनुचित प्रयोग हुने खतरा सँधै रह...
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान गर्न कन्जुस्याँई नगरौं
शुक्रबार, पुस २७, २०७५
गोर्खाली राजा नरभुपाल शाह र रानी कौशल्यावतीको जेठो सन्तानको रुपमा वि.स. १७७९ पुस २७ गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो । लिच्छबी कालको अन्त्य तीर ५२ राज्यमा विभाजन भएको मुलुकको पून एकिकरण गर्दै रा...
वाइडबडीको भकुण्डो अख्तियारको मैदानमा !
सोमवार, पुस २३, २०७५
काठमाडौं । धमिजा, लाउडा देखी वाइडबडी काण्ड सम्म भोगेको नेपाल वायु सेवा निगम अत्यन्त दुब्लो छ । दुई ठुला एयरवस ल्याउँदै वायु सेवा निगमलाई थोरै भए पनि तन्दुरुस्त बनाउने सरकारी प्रयास घोटालामा मुछिएसँगै...
बहिस्कारको सन्देश !
आइतवार, मंसिर २३, २०७५
मुलकको राजनीतिक परिवर्तनको दौरानमा हामीले नकारात्मक र सपनाको खेती यति गर्यौं कि जसको व्यबस्थापन गर्ने बारेमा न कहिल्यै सोच्यौं । न अध्ययन नै गर्यौं । ‘घरमा आगलागी भएपछि इनार खन्ने ’ उखानलाई आत्मसात ग...
१२ बर्षमा न्यायको खोला फर्किएन
बुधबार, मंसिर ५, २०७५
बिस्तृत शान्त्रि सम्झौता भएको १२ बर्ष पुरा भएको छ । शान्ति सम्झौताका एक जना हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी अध्यक्षको हैसियतले सरकारअंग बनेका छन् । अर्का हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइर...
सुतेको सरकार र निदाएको नेकपा !
मङ्लबार, कार्तिक २७, २०७५
२०४६ को राजनैतिक परिवर्तन सँगै खुला रुपले नेपाली जनता माझ पुगेको वामहरु जनताको मत प्राप्त गर्दै चुनिन तयार भएकै हुन । अनेक नाममा रहेका वाम पार्टीले नाङ्ले पसल थापेको कारण छरिएको जनताको मतादेश सिंहदरवा...
बामदेवको रहर ओलीको बाध्यता !
मङ्लबार, अशोज २३, २०७५
काठमाडौंको मौसम चिसिदैछ । आम मानिसहरु शरिर तातो बनाउने कपडाको जोगाड गर्दैछन् । नेपालीहरुको महान चाडवाडहरु दैलोमा आईपुग्दैछन् । गत जेठ ३ गते जन्माइएको शिशु नेकपा विरामी पर्दैछ । नेकपा सरकार र नेतृत्वको...
मस्यौदामा के–के सच्याउन माग गर्यो एमाओवादीले ?
जनतावाट सुझाव समेत प्राप्त गरी संविधानको प्रारम्भिक